qalabka shiidi iyo qaybta dayactirka Warshad, Badeecado | Shiinaha shiidi qalabka iyo qaybaha soo saarayaasha
Qalabka ceeriin ee qumman waa mashiin duuban oo lagu qalabeeyo 4 rollers.
Mashiinka dhuxusha ee loo yaqaan 'JGM2-113' waa milkiile xawaare dhexdhexaad ah. Qeybteeda shiidi waxay ka kooban tahay giraan wareegaysa iyo seddex rollers oo isdabajoog ah oo is wareegaya oo wareegaya wareega giraanta.
Cement vertical mill ayaa loo isticmaalaa in lagu shiido waxyaabaha ceyriinka ah ee sibidhka. Mabda 'u shaqeynteedu waa: alaabta ceeriin waxay gashaa tuubada soosaarka iyada oo loo marayo waalka qufulka hawada ee saddex-geesoodka ah, iyo tuubada dheecaanku ka soo galayo gudaha dhagax-tuurka iyadoo loo marayo dhinaca kala-sooca.
JLMS rullaluistemadka waxaa loo isticmaalaa ka hor-shiidi ee clinker sibidhka.
Slag vertical slag waa nooc cadaadis hawo qaadis ah oo ah qalabka wax shiida, kaas oo qalajin doona slagga isla markaana shiidi doona slag.